लेख > भगवानको अनुग्रह > परमेश्वरले कहिल्यै माया गर्नुहुन्न
भगवानले हामीलाई माया गर्न कहिल्यै रोक्नुहुन्न!
के तपाईंलाई थाहा छ परमेश्वरमा विश्वास गर्ने सबैलाई परमेश्वर उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ? मानिसहरूलाई सृष्टिकर्ता र न्यायाधीशको रूपमा कल्पना गर्न मानिसहरूलाई सजिलो लाग्छ, तर भगवानलाई उनीहरूलाई गहिरो प्रेम गर्ने र हेरचाह गर्ने व्यक्तिको रूपमा देख्न गाह्रो छ। तर सत्य यो हो कि हाम्रो असीम प्रेम, सृजनात्मक, र सिद्ध भगवानले उहाँ विपरितको कुनै पनि कुरा सृष्टि गर्नुहुन्न, जुन उहाँ आफैंको विपरित हो। ईश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सबै कुरा राम्रो छ, आफ्नो पूर्णता, रचनात्मकता र प्रेमको ब्रह्माण्डमा एक पूर्ण अभिव्यक्ति। घृणा, स्वार्थ, लोभ, डर र डर जस्ता - जहाँ हामी यसको विपरित फेला पार्दछौं - यो त्यस्तो होइन किनभने भगवानले त्यो मार्ग सृष्टि गर्नुभयो।
के असल कुराको विकृति बाहेक अरू के खराब छ र? सबै चीजहरू जुन परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भयो, सृष्टि गर्नुभयो। यो एकदम राम्रो थियो, तर यो सृष्टिको दुरुपयोग हो जसले खराबीलाई सिर्जना गर्दछ। यो अस्तित्वमा छ किनकि हामीसँग स्वतन्त्रतालाई परमेश्वरबाट टाढा राख्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई नराम्रो स्वतन्त्रता दिईरहेको असल स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दैछौं, हाम्रो अस्तित्वको स्रोत, उहाँसाथ जानु भन्दा।
यसले व्यक्तिगत रूपमा हाम्रोलागि के अर्थ राख्छ? केवल यो: भगवान्‌ले हामीलाई उहाँको निःस्वार्थ प्रेमको गहिराइबाट सृष्टि गर्नुभयो, उहाँको असीमित पूर्णता र सृजनात्मक शक्तिबाट। यसको मतलब यो हो कि हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ र राम्रो छौं, जसरी उसले हामीलाई सृष्टि गर्यो। तर हाम्रो समस्या, पाप र गल्तीहरूको बारेमा के छ? यी सबै तथ्यहरू हामी परमेश्वरबाट टाढा हौं भन्ने तथ्यका परिणामहरू हुन्, कि हामी आफैले परमेश्वरको सट्टामा हाम्रो अस्तित्वको स्रोतको रूपमा हेर्छौं जसले हामीलाई बनाउनुभयो र हाम्रो जीवन बचाउनुभयो।
यदि हामी परमेश्वरबाट तर्केका छौं र उहाँको प्रेम र दयाबाट टाढा रहेको आफ्नै दिशातर्फ गइरहेका छौं भने उहाँ वास्तवमा के हुनुहुन्छ भनेर हामी देख्न सक्दैनौं। हामी उसलाई एक डरलाग्दो न्यायाधीशको रूपमा देख्छौं, कोही डराउँछन्, कसैले हामीलाई चोट पुर्‍याउन प्रतिक्षा गरिरहेका हुन्छन्, वा हामीले गरेका गल्तीहरूका लागि बदला लिन्छन्। तर भगवान त्यस्तो छैन। उहाँ सधैं राम्रो हुनुहुन्छ र उहाँ हामीलाई सधैं प्रेम गर्नुहुन्छ।
येशूले दुई छोराहरूको कथा सुनाउनुभयो। ती मध्ये एक तपाईं र म जस्तो थियो। ऊ आफ्नो ब्रह्माण्डको केन्द्र बन्न चाहान्छ र आफ्नो लागि आफ्नै संसार बनायो। त्यसैले उसले आफ्नो विरासतको आधा दावी गर्‍यो र आफुलाई खुशी पार्न मात्र बाँच्न सकेसम्म दौड्यो। तर आफुलाई खुशी पार्ने र आफ्नै लागि बाँच्ने समर्पणले काम गरेन। जति उसले आफ्नो सम्पत्तिको पैसा आफैंको लागि प्रयोग गर्‍यो, उति नै नराम्रो महसुस भयो र झन दयनीय भयो।
आफ्नो उपेक्षित जीवनको गहिराईबाट, उनका विचारहरू आफ्ना बुबा र आफ्नो घरतिर फर्किए। एक संक्षिप्त, उज्ज्वल क्षण को लागी उनले बुझे कि उनी वास्तवमा चाहेको सबै चीज, उसलाई वास्तवमै चाहिने सबै कुरा, उसलाई राम्रो र खुशी लागेको महसुस गर्ने सबै कुरा उसको बुबासँगै घरमा भेट्नुपर्‍यो। सत्यको यस क्षणको बलमा, आफ्नो बुबाको मुटुसँग यस क्षणिक अपरिपक्व सम्पर्कमा, उसले सुँगुरको कुहोरबाट आफैलाई फाड्यो र आफ्नो बुबासँग एक छ कि छैन भन्ने सोचमा घरतिर लाग्यो। मूर्ख र हार्ने ऊ बन्न चाहन्छु।
तपाईलाई बाँकी कथा थाहा छ - तपाईले त्यसलाई लूका १ 15 मा भेट्न सक्नुहुन्छ। उनका बुबाले उनलाई फेरि आफूसँगै लैजानुभयो, तर उसलाई आफू टाढा पुग्दा आउँदै गरेको देख्यो। ऊ आफ्नो उडन्ते छोराको लागि गम्भीरतासाथ पर्खिरहेको थियो। र ऊ उनलाई भेट्न दगुर्दै आयो, अug्गालो हालेर, उसलाई प्रेम गरी शाऊलले शाऊल उसले सधैं माया गर्यो। उसको आनन्द यति ठूलो थियो कि यो मनाउनुपर्‍यो।
अर्को एक जना भाइ थियो, जेठा थियो। आफ्नो बुबाको साथ बसेको, जो भाग्न को लागी थिएन र जसले आफ्नो जीवन गडबड छैन। जब यस भाइले उत्सवको बारेमा सुने, उनी रिसाए र रिसाए र आफ्ना भाई र बुबासँग रिसाए र भित्र जान चाहेनन्। तर उनका बुबा पनि उनीसँग बाहिर गए र उही प्रेमबाट उनले उनीसँग कुरा गरे र उनको असीम प्रेमले उनलाई प्रेम देखाए जुन उनले आफ्नो शातिर छोरालाई बरसाए।
के जेठो दाइ अन्ततः फर्कियो र उत्सवमा भाग लिनुभयो? येशूले हामीलाई त्यो बताउनुभएन। तर कथाले हामीलाई भन्दछ कि हामी सबैले के जान्नु पर्छ - भगवानले हामीलाई कहिले पनि माया गर्न छोड्नुहुन्न। उहाँ हामीतर्फ फर्कनुहोस् र उहाँतर्फ फर्कन चाहानुहुन्छ र उहाँ हामीलाई माफ गर्नुहुनेछ, स्वीकार्नुहुनेछ र प्रेम गर्नुहुनेछ कि भन्ने सवालमा उठेको छैन किनकि उहाँ हाम्रा परमेश्वर बुबा हुनुहुन्छ, जसको असीम प्रेम सधैं एक समान छ।
के तपाईं परमेश्वरबाट भाग्न छोड्ने र उहाँको घर फर्कने समय आएको छ? परमेश्वरले हामीलाई सिद्ध र संपूर्ण बनाउनुभएको छ, उहाँको प्रेम र उहाँको सृजनात्मक शक्तिको सुन्दर ब्रह्माण्डमा एक अद्भुत अभिव्यक्ति। र हामी अझै छौं। हामीले केवल घुमाउनुपर्नेछ र हाम्रो सृष्टिकर्तासँग पुन: कनेक्ट गर्नुपर्दछ, जसले हामीलाई आज पनि प्रेम गर्दछ, जसरी उहाँ हामीलाई बोलाउनुहुँदा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो।